Diyaarado dagaal oo duqeeyay Saldhig Shabaab ku leeyihiin Sh/hoose – STAR FM SOMALIA
Diyaarado dagaal oo duqeeyay Saldhig Shabaab ku leeyihiin Sh/hoose
Wararka inaga soo gaaraya Gobolka Shabellaha hoose, ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay duqeyn ka geysteen deegaano ka tirsan Gobolkaasi.
Duqeynta ayaa la sheegayaa inay ka dhacday deegaanka Waayo-arag oo 7-KM u jira Deegaanka Janaale ee Gobolka Shabellaha hoose, halkaasi oo Saldhig ciidan ay ku lahaayeen Ururka Al Shabaab.
Duqeynta oo dhacday xalay saqdii dhexe waxa ay wararka sheegayaan in la beegsaday Saldhigaasi, sida uu xaqiijiyay Guddoomiyaha Gobolka Shabellaha hoose Ibraahin Aadan Cali (Najax).
Guddoomiyaha wuxuu sheegay inay maqleen duqeyntaasi, balse ilaa hada aysan haynin macluumaad sax ah oo xaqiijinaya Khasaaraha Shabaabka ka soo gaaray duqeynta iyo rasmi ahaan diyaaradaha fuliyay duqeyntaasi dhacday..
Dadka deegaanka Janaale, ayaa sheegay inay maqlayeen jugta qaraxyo ka dhacaya duleedka Janaale, balse markii dambe ay ogaadeen wixii dhacayay inay ahaayeen duqeyn Diyaaradeed.
Diyaarado dagaal ayaa dhowr mar duqeyn waxa ay ku garaaceen Saldhigyo Ururka Shabaab ay ku leeyihiin qaar ka tirsan Gobolada dalka Somaliya, iyadoo Khasaare kala duwan Shabaabka ay ka soo gaareen Duqeymahaasi.
Ilaa hada si sax ah looma oga Khasaaraha rasmiga ah ee Shabaab ka soo gaaray duqeyntaasi ka dhacday Gobolka Shabellaha hoose.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo baajiyay banaan bax saaka ka dhici lahaa Muqdisho
Ciidamadda Kenya oo looga digay inay faragelin ku sameeyaan siyaasadda Soomaaliya